Autodraw: yintoni le, iyintoni kwaye ngubani othabatha inxaxheba | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Encarni Arcoya | 06/09/2021 13:00 | Izixhobo zoYilo
Ngaba uyayazi inkqubo Zenzekelayo? Isixhobo esifana nepeyinti onokuthi uyazi, ukusuka kwiMicrosoft, kodwa ngokongeza okongezelelekileyo: ubukrelekrele bokufakelwa. Le nkqubo yenye yezona zaziwa kakhulu kubaqulunqi. Kodwa kuya kufuneka uyazi ukuba ungayisebenzisa njani ngokufanelekileyo.
Ngesi sizathu, sifuna ukuthetha nawe nge-AutoDraw engezantsi. Uya kuyazi ukuba yintoni, ungenza ntoni ngale nkqubo, izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga ezinazo kunye nezinye iinkcukacha ongafanele uziphose nangayiphi na indlela. Ngaba siyayifumana?
1 Yintoni i-Autodraw
2 I sebenza njani
3 Yiyiphi imisebenzi eyenziwa ngu-Autodraw
4 Ngoobani amagcisa okwenene emifanekiso ye-Autodraw
Into yokuqala omele uyazi nge-AutoDraw kukuba inxulumene ngokusondeleyo neGoogle, kangangokuba kunjalo Isicelo sewebhu esisungulwe yile nkampani injongo yayo kukunceda abantu abangaziyo ukuzoba ukuze indalo yakho yenziwe ngokungathi ngoochwephesha.
Umzekelo, cinga ukuba uceliwe ukuba uzobe ihashe. Ukuba awuyazi indlela yokuzoba, uya kwenza konke okusemandleni akho ukuyenza ibe nomfanekiso oqhelekileyo wehashe, kodwa asinakucela ngaphezulu. Endaweni yoko, i-AutoDraw isebenzisa eso siseko ukuyiqonda umzobo kwaye uyilungelelanise nomfanekiso ofuna ukubamba, onjengokuzoba okuneenkcukacha kwaye kwenziwe kakuhle kwesi silwanyana.
Ngamanye amagama, i-AutoDraw sisixhobo sokupeyinta kunye nokuguqula loo mizobo yenziweyo kwabanye esemgangathweni kunye nesiphumo, ngendlela yokuba nabani na enze abantu bacinge ukuba bayayazi indlela yokuzoba. Ukwenza oku, isebenzisa imizobo ye vector njengesiseko, zeziphi iindlela onokukunika zona ukuze uzikhuphele kwaye emva koko uzisebenzise ukutshintsha umbala, ukuyila ngokutsha okanye ukwenza ngokwezifiso iprojekthi onayo eqhubekayo.
Ngaba uyafumaneka kuye wonke umntu kwaye ukhululeke ngokupheleleyo. Ke, ukusuka ekubhaleni unokufumana umzobo wobugcisa simahla. Ngoku, awungekhe ubuze imifanekiso ecace gca, kuba ayikho. Zisekwe ikakhulu kwimifanekiso eyahlukileyo, yomlinganiswa omnye. Oku akuthethi ukuba ungabeka indawo ezininzi ngaxeshanye, kuba ikuvumela ukuba ukhethe umfanekiso kwaye uwutshintshe ubungakanani bawo okanye uwuhambise wenze ukwakheka okungafaniyo.
Ngaba sele unomdla wokusebenzisa kwaye ubone ukuba yeyiphi i-AutoDraw ekwaziyo ukuyenza? Ewe, asizukukwenza ukuba ulinde, kuba apha ngezantsi siza kukunika uqikelelo oluncinci lwento onokuyenza ngayo.
Into yokuqala oyifunayo kukuya kwi- AutoDraw iwebhusayithi esemthethweni. Awunakukhuphela nantoni na kwikhompyuter yakho, kufuneka kuphela isikhangeli ukufikelela kwiwebhu.
Xa ulapho uya kufumana ithuba lokuqala isixhobo (inkwenkwezi) okanye undwendwele imenyu apho bakufundisa ukuba ngoobani ababhali, indlela yokwenza izinto ezithile okanye malunga ne-AutoDraw.
Njengoko sinomdla kwisixhobo ngokwaso, xa ucofa inkwenkwezi kwiscreen iya kutshintshela kuhlobo lwenkqubo yomfanekiso nge-canvas engenanto kunye nemenyu elula kakhulu ekhohlo.
Ngokuzenzekelayo ibrashi iya kubekwa, ukuze uqale ukupeyinta nanini na ufuna. Njengoko usenza, kwicandelo elingasentla isixhobo siza kukunika ukhetho njengoko sizama ukubona into oyipeyintayo kwaye sikunike ulinganiso kwimizobo enokuba yile nto uyizobayo. Kuya kufuneka ucofe enye kwaye ubuchwephesha bakho buza kutshintshelwa kumfanekiso owenziwe kakuhle.
Okokugqibela, unokuzoba kwakhona, ukwenza ukwakheka, okanye uqale ukusebenza kuloo mfanekiso, umzekelo ukuwufaka umbala (kunye nemvelaphi), wenze amanye amanani (ngokusekwe kwinto oyizobayo okanye kwabanye, njl.).
Yiyiphi imisebenzi eyenziwa ngu-Autodraw
I-AutoDraw yaziwa ikakhulu ngokuba sisixhobo sokuzoba. Kodwa inyani kukuba ayisiyiyo kuphela kwento enokukwenzela esi sixhobo sikwi-Intanethi. Kukho okuninzi ngakumbi okukuvumela ukuba wenze eyakho imizekeliso kwimizuzu embalwa. Umzekelo, unga:
Yongeza isicatshulwa. Unokongeza kangangoko ufuna, nangona kufuneka uthathele indawo isithuba. Ukongeza, inokubekwa kwiindidi ezahlukeneyo zeefonti kunye nemibala.
Yongeza umbala. Ngokuzenzekelayo imizobo izakuphuma iluhlaza okwesibhakabhaka, kodwa inyani kukuba unokuba nayo kweminye imibala. Ukuba sele unawo umzobo, kuya kufuneka utshintshe umbala emva koko ucofe iqhosha lokugcwalisa ukuze ukhethe umfanekiso kwaye uwutshintshe.
Sondeza. Ukwenza i-canvas ibe nkulu. Ukuba ufuna ukuyenza incinci ephepheni ngokwalo, kwikona esezantsi ekunene unxantathu omnyama okunceda ukuba usondeze kancinane okanye ngaphezulu.
Hlehlisa. Kwimeko apho kuya kufuneka ubuyele umva ususe umsebenzi owawukhe wawenza ngaphambili.
Khuphela kwaye wabelane. Ukukhuphela umzobo, ngefomathi ye-png, okanye wabelane ngawo kwiinethiwekhi zentlalo. Ewe kunjalo, gcina engqondweni ukuba umfanekiso we-png uza kuba nzima kuba uya kuyikhuphela kumgangatho ophezulu. Ukuba ufuna ukuyicinezela okanye ukunciphisa ubunzima, kuya kufuneka uyivule ngenkqubo yokuhlela imifanekiso kwaye uyigcine kwenye ifomathi okanye uyilayishe kwi-Intanethi ukuze utshintshe ubungakanani.
Yongeza imilo. Unokongeza iimilo zejiyometri kuyilo lwakho.
Ngaphandle kwale misebenzi, unakho nabanye ukufikelela kwiindlela ezimfutshane zekhibhodi, ukusuka kwimenyu ephambili.
Ngoobani amagcisa okwenene emifanekiso ye-Autodraw
Ngoku ukuba uyasazi isixhobo se-AutoDraw, ungazibuzi ukuba ngoobani ababhali abenza ukuba ukwazi ukusebenzisa imizekeliso eyenziwe kakuhle hayi eyokuqala oyenzileyo ukuze inkqubo ikunike ukhetho lokwazi Uzoba? Ewe ewe, kukho abantu abasemva kwemifanekiso. Kwaye la magcisa anelungelo lokwaziwa.
Kule meko, I-AutoDraw yindawo yokusebenzisana yamagcisa. Yonke imifanekiso ephumayo inokukhutshelwa phantsi kwelayisensi ye-Creative Commons Attribution 4.0 yelizwe jikelele.
Uninzi lwemifanekiso oyibonayo kwi-AutoDraw yeqela elikwiSelman Design, isitudiyo sokuyila eNew York, kodwa kukho ezinye ezenziwa ngamagcisa ahlukeneyo kunye nabaqambi abanjengoSimone Noronha, Tori Hinn, Pei Liew, Erin Butner, Julia Melograna , Melia Tandiono okanye Hawraf.
Ewe, imifanekiso emitsha emincinci iyongezwa, kwaye ezi zibonakala zikhutshelwa kwiwebhusayithi yamagcisa, zombini ukuzazisa kubadali, kunye nokukwazi ukusebenzisa imifanekiso.
Ngaba unesibindi sokuzama i-AutoDraw kwaye ugcine ixesha xa uzoba uyilo oluthile?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Autodraw